प्रदेश १ « Onlinetvnepal.com
प्रदेश १ को अर्थ मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट बनाउने तयारी थालेको छ । मन्त्रालयले कर प्रणाली र राजस्व असुलीबारे अध्ययन गर्न दुई उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा यो समाचार छापिएको छ । बजेटलाई जनमुखी बनाउन कार्यदल बनाइएको आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए ।
प्रदेश नम्बर १ का नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सांसदहरुको सपथ ग्रहण कार्यक्रम समारोहमा ९ जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको तस्वीर सजाइएको छ । साथै सपथ ग्रहण समारोहस्थलमा प्रदेश नम्बर १ को पहिचान झल्काउने सगरमाथादेखि भोजपुरे खुकुरीसम्मका तस्वीरहरु राखिएको छ । सपथ ग्रहणका तयार पारिएको मञ्चमा शाहीकालीन पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. कीर्तिनिधि विष्टको समेत तस्वीर राखिएको
राजधानी माग्नेलाइ प्रदेश प्रमुख सुब्बाले यसो भनेपछि
प्रदेश १ का प्रमुख डा. गोविन्द सुब्बाले आफ्नै जिल्लामा प्रदेशको राजधानी होस् भन्ने जनताको चाहनालाई अन्यथा भन्न नसकिने बताएका छन् । तर, केही दिन धैर्य गर्न आग्रह गरेका छन् । सरकारी आवासमा अनलाइनखबरसाग कुरा गर्दै सुब्बाले भने, ‘चाहना व्यक्त गर्नु पनि पर्छ । तर, आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकार
ल हेर्नुहोस्, प्रदेशसभा सदस्यको सपथको लागि माकुराको जालो सफला गर्न थालियो
प्रदेश १ को प्रदेशसभा (संसद्)को पहिलो बैठकका लागि वीरेन्द्र सभागृहलाई सिंगार्न थालिएको छ । तर, लामो समयदेखि मर्मत सम्भार हुन नसकेको सभागृहको अवस्था यस्तो छ कि दुई दिनमा जति काम गरेपनि तत्कालका लागि काम चलाउ मात्र हुनेछ । सभाहलका अधिकांश भागमा माकुराको जालो छ भने धेरै कुर्सीहरु भाँचिएका छन् ।
विराटनगर राजधानी हुनुपर्ने माग
प्रदेश नं १ को राजधानी विराटनगर हुनुपर्ने माग गर्दै मोरङ मुस्लिम समाजले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । समाजले मोरङका प्रजिअ रामप्रसाद आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । प्रदेश नं १ को राजधानीका लागि विराटनगर राजनीतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक र आर्थिक रुपमा अग्रस्थानमा रहेको समाजले जनाएको छ । आफ्ना
प्रदेश राजधानी माग गर्दै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय धनकुटा घेराउ
प्रदेश नं १ को राजधानी धनकुटालाई बनाउन सरकारसँग माग गर्दै आन्दोलित धनकुटावासीले पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय धनकुटामा धर्ना दिएका छन् । आइतबार सदरमुकाम बन्द गराएका धनकुटावासीले राजधानी माग गर्दै सडकमा आन्दोलन गरेको १८ आँै दिन पुगेको छ । स्थानीय मदनचोकमा भेला भई उनीहरुले बजार परिक्रमा गरेर पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय